Nhau - Chii chinonzi compostable zvinhu?
Kuodza kwakadzika kunogumira kweiyo biodegradation, kudomwa kwenzvimbo diki diki, nguva yekudzikisira, chiyero uye kukanganisa kune zvakatipoteredza. European Union ine dudziro yeichi, icho chinotsanangurwa se "zvinhu zvinogumbuka". Zvinoenderana neEN13432, zvigadzirwa zvinogadzirwa zvinofanirwa kuratidza hunhu hweiyo biodegradability, ndiko kuti, kugona kwezvinhu zvekugadzira manyowa kuti zvishandure kuita CO2 pasi pekuita kwemajusi. Ichi chivakwa chakayerwa nerabhoritari yakajairwa bvunzo nzira: en14046 (yakaburitswawo seso14855: biodegradability pasi peanodzorwa composting mamiriro). Kuti uratidze kukwana kwakazara kweiyo biodegradability, ingangoita 90% yeiyo biodegradation level inofanirwa kusvikwa mukati memwedzi isingasviki mitanhatu.
EU inoburitsa mirau pazvinhu zvinogadziriswa zvinodzikisira
Iko kuparara kwakayerwa muyedzo yemutyairi (en14045), kureva kupatsanurwa uye kurasikirwa kwekuonekwa (hapana kusvibiswa kunooneka) mumushonga wekupedzisira. Samples yezvinhu zvekuyedza zvaive zvine manyowa nehupenyu hwehupenyu kwemwedzi mitatu Kompositi yekupedzisira inozobviswa kuburikidza nesefa ye2 mm. Huremu hwemasara ezvekuyedza zvinhu nehukuru> 2mm huchave husingasvike gumi muzana yemasaisa ekutanga.
Kutenderera maitiro ezvinhu zvinogadzirwa
Pakanga pasina chakashata pamhedzisiro, iyo yakaverengerwa neyekuyera muyero composting bvunzo. Kuderera kwezvikamu zvesimbi zvinorema (pazasi peyakapihwa pazasi) uye hapana mhedzisiro inokanganisa composting yekupedzisira (kureva. Kudyara kwekukura bvunzo (yakagadziridzwa oecd208) uye kumwe kuongorora kwefizikikemikari kwakaiswa mukumesa compost uko kukanganiswa kwezvinhu zvekuyedza kwakaitika.
Biodegradable Zvinhu isu (Wuhu Radar Plastic Kambani Limited) zvigadzirwa zvekugadzira ne
Tiri kutora PLA nePBAT sezvinhu zvedu zvikuru zvezvinhu zvedu zvinogadziriswa
1, Pla inonamatira kuputira, PLA Tambanudza firimu, PLA kurongedza firimu;
2, mabhegi ePLA (inogadziriswa mabhegi imbwa mabhegi, mabhegi anogadzirwa nemarara), inova PLA + PBAT;
3, Pla mashanga, biodegradable PLA kunwa Uswa.
Zvigadzirwa zvedu zvese zviri 100% zvinogadziriswa zvigadzirwa uye zvinogoneka, inova EN13432, ASTM D6400, BPI, FDA, yakatenderwa.
Compostable Garbage Bags, Eco Cling Kuputira Shuga Kuputira, Biodegradable Compostable Marara Mabhegi, Biodegradable Inotambanudza Firimu, Biodegradable Cling Kuputira, Compostable Bags,